Ii-Dominoes 🥇 Ngena kwaye wonwabe kwi-emulator
Dominoes. Umdlalo weedomino kakhulu idume kwihlabathi liphela kwaye idlalwe ngamawaka abantu. Kwiindibano zosapho, izangqa zabahlobo, amaqela, i-barbecues, ngeempelaveki, njl.
Inokuba yeyona midlalo indala apho kukho izingqinisiso.
Iidomino: indlela yokudlala inyathelo ngenyathelo😀
UDomino ngumdlalo webhodi osebenzisa iziqwenga zeemilo eziziingxandeNgokubanzi, inikwe ubungqongqo obanikeza Imilo yeparallelepiped, apho obunye ubuso bubhalwe khona amachaphaza abonisa amaxabiso.
Eli gama lisetyenziselwa ukuchonga ngokukodwa iziqwenga ezenza lo mdlalo. Igama mhlawumbi livela kwintetho yesiLatin "indawo yasimahla" ("Ndiyabulela iNkosi"), utshilo abefundisi baseYurophu ukuphawula uloyiso kumdlalo.
Amacandelo: Iziqwenga ezingama-28 ezinamacala asukela ku-0 ukuya ku-6.
Amacandelo omthathi-nxaxheba: Iziqwenga ezi-7 zomthathi-nxaxheba ngamnye.
Injongo yomdlalo: yenza amanqaku angama-50.
Isiqwenga seDomino: sisiqwenga esenziwe ngamacala amabini, inye inenombolo (imizekelo yamaqhekeza: 2-5, 6-6, 0-1).
Indlela ukubeka iziqwenga?: xa isiqwenga sibekwe ecaleni kwesinye esinenani elinye elifana (umzekelo: 2-5 iyahambelana 5-6)
Ukudlulisa ithuba: xa umdlali engenaso isiqwenga esilingana nesiphelo.
Umdlalo uvaliwe: xa kungekho mdlali enesiqwenga esifanela isiphelo ngasinye.
Ngubani ophumelele umdlalo?: xa omnye wabadlali ekwazi ukuphelelwa ziingceba esandleni sakhe, ebalungiselele bonke.
Uyidlala njani iDominoes?🁰
Iziqwenga "zixutywe" etafileni, kwaye umdlali ngamnye uthatha Iziqwenga ezi-7 zokudlala. Umdlali oqala umdlalo nguye ineqhekeza 6-6🂓. Qalisa umdlalo ngokubeka esi siqwenga embindini wetafile. Ukusuka apho, dlala ngokuchaseneyo nexesha.
Umdlali ngamnye kufuneka azame ukulungelelanisa amanye amaqhekeza akhe kula maqhekeza ekupheleni komdlalo, kube kanye ngexesha. Xa umdlali ekwazi ukulingana isiqwenga, ujiko ludluliselwa kumdlali olandelayo. Ukuba umdlali akanaso isiqwenga esifanela naliphi na icala, ithuba kufuneka lidlule, ngaphandle kokudlala iziqwenga.
El umdlalo ungaphela kwiimeko ezimbini: xa umdlali ekwazi ukubetha umdlalo, okanye xa umdlalo utshixiwe. Umdlali wokuqala ngeli xesha uzakuba ngumdlali ukuya ngasekunene komdlali wokuqala kumdlalo odlulileyo.
Ukuba nawuphi na umdlali uphumelele umdlalo: iqela lakho lithatha onke amanqaku kumaqhekeza asezandleni zabachasi.
Ukuba umdlalo utshixiwe: onke amanqaku afunyenwe sisibini ngasinye abaliwe.
Isibini esinamanqaku ambalwa siphumelele, kwaye sithatha onke amanqaku esibini esichasayo. Ukuba kukho iqhina kolu balo lwenqaku, isibini esivimbe umdlalo siphulukana kwaye isibini esiphumeleleyo sithatha onke amanqaku kwesi sibini. Amanqaku esibini esiphumeleleyo aqokelelwe kwaye umdlalo uphela xa enye yezibini ifikelela kumanqaku angama-50.
Ixabiso leqhekeza kwisiqwengana ngasinye lihambelana nesixa semilinganiselo yamaqondo eziphelo zombini. Ke ngoko, isiqwenga esingu-0-0 sixabisa amanqaku ali-0, isiqwenga 3-4 sixabisa amanqaku ayi-7, isiqwenga 6-6 sixhomekeke kumanqaku ali-12, njalo njalo
Umdlalo unabathathi-nxaxheba abane, abenza izibini ezibini, kwaye kufuneka bahlale kwezinye iindawo.
ithiyori eyamkelekileyo yeyokuba yayiya kuvela eTshayina phakathi konyaka wama-243 ukuya kowe-181 BC , Yenziwe lijoni eligama linguHong Ming.
Ngelo xesha, iziqwenga zazifana kakhulu namakhadi okudlala, elinye uyilo lelizwe, kwaye babebizwa nangokuthi "iileta ezichaziweyo" .
Entshona, akukho rekhodi yeedomino kude kube phakathi kwinkulungwane ye-XNUMX, xa ivele ngaphakathi IFransi ne-Itali, ngokuchanekileyo kwiinkundla ze IVenice neNaples, apho umdlalo wawusetyenziselwa ukuzonwabisa.
Ukuma okulandelayo kubonakala ngathi yiNgilani, yaziswa ngu Amabanjwa aseFrance ngasekupheleni kwenkulungwane ye-XNUMX.
Ukusukela ngoko ukuya phambili, kuxhomekeke kwingcinga yethu kunye nolwazi olusisiseko lwembali, kodwa sinokubulela kuphela abafuduki, bamkelekile okanye hayi, abazise umdlalo kumazwe aseSpain.
Into yomdlalo kunye nokuhonjiswa
Ibhloko encinci, ethe tyaba kunye noxande, Iidomino zinokwenziwa ngezinto ezahlukeneyo, ezinje ngomthi, ithambo, ilitye, okanye iplastiki.
Iinguqulelo ezintle ngakumbi, ezithunyelwe ngabathandi bezemidlalo kunye nabaqokeleli, zenziwe ngemarble, igranite kunye nelitye lesepha.
Ezi mizekelo zihlaziyiweyo zihlala zipakishwe kwiibhokisi ezizezakho, zihlala zenziwe ngevelvet, kwaye ziboniswa njengezinto eziyinyani zokuhombisa.
Njengamakhadi okudlala, okwahlukileyo, ii-dominoes zineempawu zokuchonga kwelinye icala kwaye zingenanto kwelinye.
Ubuso obunesazisi kwisiqwenga ngasinye bohlulwe, ngomgca okanye ngaphezulu, kwizikwere ezibini, nganye kuzo iphawulwe ngothotho lwamachaphaza, njengalawo asetyenziswa kwidatha, ngaphandle kwezikwere ezimbalwa eziseleyo. ezimhlophe.
Kwinguqulelo yaseYurophu yomdlalo, zisixhenxe iziqwenga ngaphezulu kwesiTshayina, zizonke iziqwenga ezingama-28.
Ngelixa ilitye elinelona nani liphezulu kwii-dominoes zethu ezi-6-6🂓, ngamanye amaxesha iiseti ezinkulu ezinokufikelela kwi-9-9 (iziqwenga ezingama-58) ukuya kuthi ga kwi-12-12 (iziqwenga ezingama-91) ezisetyenzisiweyo.
I-Inuit yaseNtla Melika idlala inguqulelo yeedomino zisebenzisa iiseti eziqukethe iziqwenga ezili-148.
E-China, apho ubuchule bomdlalo kubonakala ngathi abunasiphelo, I-Dominoes ikwasebenza njengesiseko kunye nemodeli yomdlalo ofanayo kodwa onzima ngakumbi: mahjong .
Zeziphi izibonelelo kunye nokungalunganga kweedomino?
Nawuphi na umdlalo unezibonelelo zawo kunye nezinto ezingalunganga, nokuba indala njengeedomino. Izibonelelo zayo zibungqonge ubutyebi bomdlalo kunye nezinto ezingalunganga kuzo izinto ezichasayo.
Ukuqala ngezibonelelo, enye yazo kukuba ngumdlalo kuyo yonke iminyaka, kuba kulula ukuyiqonda, ukuhlangana kunye nokuphatha ngokulula, ukanti ngenani elikhulu lezicwangciso zokukholisa abo badlala ixesha elide.
Ngaphakathi kweli qela lineminyaka eliqela kukho izibonelelo zokuqonda, ezinje ngokukhuthaza ukukhula kwengqondo kwemathematika koyena mncinci, ingcinga ecwangcisiweyo yabantu abadala kunye nenkumbulo yabantu abadala.
Okokugqibela, ngumdlalo osebenzayo. Ngomhlaba othe tye kwaye ubuncinci abadlali ababini, kuya kwanela ukuqala umdlalo.
Kodwa nomdlalo onezibonelelo ezininzi unezinto ezincinci ezicaphukisayo. Ukuqala kwinto yokuba Kukho abadlali abane kuphela, ubuncinci kwimidlalo emininzi. Kunzima ukonwabisa iqela elikhulu, umzekelo.
Enye into ebuyisayo yi "finesse" ukuseta umdlalo, njengemidlalo emininzi yebhodi okanye imidlalo yebhodi. Iziqwenga zihlanganisiwe ngaphandle kwalo naluphi na uhlobo lokulungiswa. Kukungqubana ngesiquphe kwetafile kwaye kunjalo.
IziqwengaNgapha koko, azilunganga kuzo, ubuncinci xa zilahlekile, kuba zincinci, okanye ziyaguga, ziphulukana nokubonakala kwazo kunye nexabiso lazo, ngokwamachaphaza.
Indibano elula kunye nokuphathwa
Izinto ezilahlekileyo kunye / okanye ezinxibileyo
Owona mkhonyovu uthandwayo kwi-Intanethi